Nooca Dhibaatada Griezmann Ku Haysata Barcelona Waa……. Messi-na Dhibaatada Ugu Wayn Ayuu Tababarka Iigu Gaystaa. - (HILLAAC.NET) THE BEST INDEPENDENT RELIABLE SOMALI NEWS
Nooca Dhibaatada Griezmann Ku Haysata Barcelona Waa……. Messi-na Dhibaatada Ugu Wayn Ayuu Tababarka Iigu Gaystaa.
October 8, 2019 at 19:51 Nooca Dhibaatada Griezmann Ku Haysata Barcelona Waa……. Messi-na Dhibaatada Ugu Wayn Ayuu Tababarka Iigu Gaystaa.2019-10-08T19:51:30+01:00 CAYAARAHA
Difaaca xulka qaranka France iyo kooxda Barcelona ee Clément Lenglet ayaa tilmaamay nooca dhibaatada kaliya ee xidiga xulkiisa Antoine Griezmann ku haysata Barcelona.
Clément Lenglet ayaa ka mid ahaa ciyaartoydii xulka France ee Griezmann sida wayn ugu soo dhaweeyay Camp Nou wuxuuna qiray dhibaatada kaliya ee xidigan ku haysata Barcelona in ay tahay booska laga badalay ee uu hore uga soo ciyaaray.
Clement Lenglet ayaa sidoo kale ka hadlay dhibaatada uu kala kulmo Lionel Messi marka ay tababarka iskugu yimaadaan wuxuuna ku tilmaamay ciyaartoy aan caadi ahayn.
Clément Lenglet ayaa meesha ka saaray in ay jirto dhibaato kale oo Griezmann ku haysata Barcelona marka laga reebo in Valverde uu ka badalay booskii uu ka ciyaari jiray.
Clement Lenglet ayaa tobanka maalmood ee soo socda xulka qarankiisa France waxa uu kula soo qaadan doonaa Antoine Griezmann oo ay ku soo wada baxeen liiska xulkooda ee kulamada caalamiga ah wuxuuna ka hadlay xaalada xidigan ee Barca.
Ugu horayn Clement Lenglet oo ka hadlaya Griezmann ayaa yidhi: “Maalinta oo dhan waxaanu ku dhamaysanaa qosol iyo kaftan. Waxa uu isagu jecel yahay kaftanka isla markaana ismuu badalin tan iyo markii uu Barcelona ku soo biiray”.
Laakiin Clement Lenglet ayaa qiray nooca dhibaatada kaliya ee uu Griezmann ku dareemayo Barcelona wuxuuna yidhi: “Dhamaanteen waxaynu u baahanahay in aynu fahano sida boos badalku uu u sameeyay ciyaartiisa, waxa uu Barca ku qaatay door cusub oo kale oo ay ku jirto in uu garabka weerarka ka ciyaaro”.
“Si adag ayuu kooxda ugu shaqeeyaa isla markaana hibadiisa ayuu in badan nagu caawiyaa isaga oo naf huritaan sameeya. Ma jirto wax dhibaato ah oo Griezmann haysataa”. ayuu Clement Lenglet hadalkiisa raaciyay.
Kadib Clement Lenglet ayaa ka hadlay Lionel Messi wuxuuna yidhi: “Isagu waa ciyaartoy aan caadi ahayn. Nooca ciyaartoyga uu isagu yahay waa ka farqiga dhabta ah sameeya. Isagu aad ayuu u maskax badan yahay marka ay waajibka tahay in kubbada uu ilaashado”.
Laakiin Clement Lenglet ayaa qirtay in uu ku dhibaataysan yahay xarunta tababarka Barca marka uu Messi ka hor yimaado wuxuuna yidhi: “Haddii aan daacad ahaado, anigu waxaan ka mid ahay ciyaartoyda kuwaas oo dhibtooda marka ay maalin kasta isaga tababarka kaga hor yimaadaan, laakiin waxaan ku faraxsanahay in uu todobaad kastaba dhinacayaga jiro(kulamada)”.
« Guddiga Doorashada Qaranka oo Ka Sheegtay Dhex Degenaashiyaha Villa Somalia
Markii Hore Jose Mourinho Haddana, Ole Gunnar Solskjaer Oo Daawaha Saaran-Jurgen Klopp Oo Sanad Gudihii Tababarkii Labaad Ka Caydhin Kara Man United. »